Ao Sane Beach ~ Journey-Assist - Snorkeling ao Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Ao Sane Beach
Ao Sane Beach - Phuket
Famintinana amoron-dranomasina Ao Sane Beach
Ao Sein Beach amin'ny sari-tany
Weather on Ao Sein Beach
Sary sy Lahatsary Ao Ao Sein Beach
Ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny se beach Ao Sein
Valiny ho an'ny Ao Sein Beach (Google reviews)
Hevitra ho an'ny Beach Ao Sein (Tripadvisor.ru)
Izy io dia torapasika kely, izay ny lavany dia vitsy metatra metatra fotsiny. Mba hahazoana anao eto dia mila mitondra fiara mankany amin'ny sisiny ankavanan'ny trano fandraisam-bahiny avy amin'ny Nai Harn Beach ianao. Nifarana tamin'ny farany ny lalana.
Toe-piainana eo amoron-dranomasina. Torapasika ho an'ny mpanamory
Feno vato be io torapasika io. Ny fasika amin'ny azy dia mazàna. Vitsy ny olona eto, ny ampahany lehibe amin'izy ireo.
Saika mifono zava-miafina ny moron-dranomasina, na dia efa nahazo laza ity taona ity. Mba hahatongavana amin'izany dia mila mitondra fiara avy eny amoron-dranomasin'i Nai Harn ianao mankany amin'ny trano fandraisam-bahiny Nai Harn amin'ny lalana tery tery tokana miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra. Ary aza latsaka any. Ho hitodika amoron-dranomasina ny lalana.
Aza adino fa kely ny parking eo.
Ity tora-pasika ity dia saika tsy mendrika amin'ny filomanosana mahazatra, ary mikendry indrindra ireo tia ny filentika anaty sy ny snorkeling.
Mazava ny rano eto, ary ny farany ambany dia voatsatoka amin'ny vato sy corals (velona sy maty). Ao anatin'izany, mahatsiaro tena ho an'ny rehetra ny biby mandady. Eto, dia milomano be dia be ny trondro, misy ny ranomasina, kintana, octopuses kely, ary ny sotong.
Vidiny ary foto-drafitrasa
Malemy ny fotodrafitrasa fa misy. Misy ny masoandro miloa-bidy (100 Baht. 2019), misy ny fanofana sy fitaovana ho an'ny snorkeling (avy amin'ny 50 Baht). Misy koa ny trano fisotroana kafe amin'ny tora-pasika miaraka amin'ny vidiny mirary.
Maloto sy trano fidiovana dia manana toerana hiarahana amin'ny vidiny 20 и 10 baht, tsirairay avy.
Misy aza ny sekoly misidina! Amin'izay ao anatin'ny telo andro dia afaka mahazo taratasy PADI ianao!
Misy koa alokaloka voajanahary ao anaty.
Tsy tokony atao ny hiditra rano, toy ny eny amoron-dranomasina, tsy misy fitoeranèka manokana. Mandrosoa ny tongotrao tena tsotra. Ny morontsiraka tsy misy fasika fa lago-bolokolo.
Ny tora-pasika dia tsy maintsy hita maso ho an'ny rehetra tia ny snorkeling sy ny fisakafoanana. Angamba io no toerana tsara indrindra ho an'izany ao Phuket.
Milamina ny ranomasina amin'ny vanim-potoana ambany. Ary avo amin'ny fomba samihafa. Ary tsy azo atao ny milomano raha misy onja mahery. Satria ireo vato eto dia tsy manam-petra.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/r342PmVBAEdsXh4m9
Ao Sane Beach amin'ny sari-tany
Weather on the beach Ao Sane Beach
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny ao amin'ny Ao Sein Beach.
Ao Sane Beach - sary sy horonan-tsary
Ny trano fandraisam-bahiny Ao Sane Beach - Phuket
Reviews for Ao Sein Beach (Hevitra momba ny Google)
Valiny ho an'ny Ao Sein Beach (Tripadvisor.com))
Ity angamba no tora-pasika tsara indrindra any Phuket noho ny fahatsapana fikorisana sy fisandratana.
Tsara kokoa ny snorkel (avy amin'ny zavatra akaiky) ihany ao amin'ny Nosy Similan.